Sawirro: Habkii taliyayaasha Amisom ay uga qeyb-galeen gurmadka Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Habkii taliyayaasha Amisom ay uga qeyb-galeen gurmadka Muqdisho
Sawirro: Habkii taliyayaasha Amisom ay uga qeyb-galeen gurmadka Muqdisho
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa weli isbitaalada Muqdisho ka socda Gurmadka dhiiga loogu yaboohayo dhaawacyada ay waxyeelada kasoo gaartay Qaraxii ka dhacay Isgooyska Zoobe ee magaalada Muqdisho.
Gurmadka dhiiga ayaa waxaa hadda socda wajiga labaad oo ay ku gurmanayaan Taliyayaasha, Saraakiisha iyo Ciidamada AMISOM ee ka howlgala magaalada Muqdisho.
Saraakiisha bixineysa Gurmadka dhiiga ayaa waxaa ku jira Saraakiil cadaan ah oo kasoo kala jeeda wadamada reer galbeedka ee garabka siiya ciidamada AMISOM iyo kuwa dowlada Federaalka ah ee Somalia.
Taliyayaasha dhiiga bixiyay ayaa waxaa ugu horeeyay taliyaha guud ee ciidamada AMISOM General Osman Noor Soubagle kaa oo dhiiga looga shubay xarun caafimaad oo ku dhex taalla taliska guud ee ciidamada AMISOM ee Xalane.
Sidoo kale waxaa dhiig shubay askay ka tirsan ciidamada AMISOM kuwaas oo sidoo kale muujiyay dareenkooda ku aadan musiibadii 14-ka bishan Oktobar ka dhacday isgoyska Zoope ee magaalada Muqdisho.
Taliyayaasha, Saraakiisha iyo Ciidamada AMISOM ee dhiiga ugu yaboohay dhaawacyada ayaa la sheegay in dhammaantooda ay yihiin Muslimiin isla markaana ay dareenka la qeybsanayaan walaalahooda Soomaalida.